हाइटी भूकम्प : आश मरे पनि हिम्मत हारिनँ « Khabarhub
हाइटी भूकम्प : आश मरे पनि हिम्मत हारिनँ
मेरो जीवनमा भुइँचालोसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको छ । नेपाली सेनाबाट एक वर्ष शान्ति सेनाको रुपमा म सन् २००९ को मे २० (वि.सं. २०६६) को दिन हाइटीको राजधानी प्रोटओप्रिन्स पुगेँ । फोर्स हेडक्वार्टरमा स्टाफ अफिसरको काम गरे पनि मलाई नेपालबाट ‘नेसनल कन्टिन्जेन्ट कमान्डर’ को नियूक्ति पनि दिइएको थियो ।
शान्ति सेनाको मिसनमा खट्टिने सर्व जेष्ठ अधिकृतलाई सो जिम्मेवारी दिइन्छ । त्यसबेला हाइटीमा हामी ११ सयभन्दा बढी नेपाली सेना थियौं । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी पनि धेरै थिए । हाइटीमा प्रकृतिक श्रोतसाधन भएपनि मान्छेहरु अल्छी भएकाले धेरै गरिब छन् । अनि देशका धनाड्यहरु अमेरिकामा बस्छन् भने हाइटीको जमीन, धन र राजनीति तिनकै नियन्त्रणमा छ ।
त्यहाँ क्यूवाको कम्युनिजम नआवस् र जनता अमेरीका विरोधी नवनुन् भनेर नै अमेरीकी स्वार्थमा शान्ति सेनामार्फत नियन्त्रित राज्य सत्ता चलाइएको थियो ।
अन्यथा, साधारण जुलुस र चोरी व्यापार गरेकै भरमा शान्ति सेना तैथान गर्नु जरुरी देखिन्न । अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा संसार भरी नै तैनाथ रहेका शान्ति सेनाहरु अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस, चीन, जापान आदिकै स्वार्थमा निहीत छ र शान्तिको नाममा अर्को रुपबाट राजनीतिक गडबडी भएका देशहरुमा ति शक्ति देशहरुले नियन्त्रित शासन चलाइरहेका छन् ।
हाइटीमा सवै कुरो राम्रो थियो हाम्रो लागि । त्यति बेला त्यहाँ श्री शेर गण र श्री चन्दननाथ गण तैनाती थिए भने फोर्स हेड क्वार्टरमा (हेक्वा) नौ जना स्टाफ अफिसरहरु थियौं । चन्दननाथ गण राजधानी भन्दा धेरै टाढा र शेरगण राजधानीमै तैनाथ थियो । भुइँचाले आउने दिन अर्थात १२ जनवरी २०१० को दिन शेर गणको वार्षिकोत्सव भएकाले हाइटीमा रहेका नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी लगायत अन्य आफूखुशी यूएनमा काम गर्ने सम्पूर्ण नेपालीलाई निम्ता थियो ।
मेरो बायाँ खुट्टो विक्षत भएर भाचिएकोले उठ्न सकिन । म अन्डरवेर बाहेक नाङ्गै थिए । परकम्पनहरु आइरहेका थिए । हामी बसेको घरहरु बलियो भएकोले भिरको छेउमा भए पनि भत्केनन् । घर भित्र जाने आँट कसैको भएन ।
त्यति खेर म नेसनल कन्टिन्जेन्ट कमान्डर थिइन । मभन्दा जेष्ठ अधिकृत आइसकेकाले नेपाली जंगी अड्डाले उनैलाई उक्त नियूक्ति दिएको थियो । उनी लगायत हामी ५ जना एउटै घरमा डेरा लिएर बसेका थियौं । दिनको ३ बजे तिरै वार्षिकोत्सवमा पुग्नु पर्नेमा म कामले गर्दा अफिस छोड्न सकिन । कन्टिन्जेन्ट कमान्डर चाहिँ गैसकेका थिए ।
फोर्स हेडक्वार्टर र शेरगण रहेको इलाका ड्राइभिङ दूरी ३० मिनेट जतिको थियो भने फोर्स हेडक्वार्टर र हाम्रो डेरा ४ मिनेटको ड्राइभिङ दूरीमा थियो । म अफिसबाट डेरा पुगें र जान तयारी हुनु अगाडी नुहाउन थाले । यति बेला पौने ५ बजेको थियो जस्तो लाग्छ । बाथरुममा छिरेर धारो खोल्नासाथ कानै फुट्ने आवाजले घर करायो । तत्कालै नुहाउने वेसीन, कम्बोट, ऐनाहरु उफ्रिन थाले । के भयो, म भूईमा पछारिए ।
म अन्डरवेरमा थिएँ र बाथरुम छेउको बरन्डामा गए र बाहिर हेरेको बाहीर त दिउँसै रात परेको देखें । केही सेकेन्डमै मेरो ढाडमा पछाडीको झ्यालले हानेर म बरन्डा बाट उछिच्टीएँ र एकतला माथिबाट तल जमीनमा बजारिएँ । यतिखेरसम्म के भैरहेको छ मलाई थाहा भएन । भूइँचालो आएको भन्ने त मेरो मन शंकामा नै थिएन । किनकि त्यहाँका जनताले हाइटीमा भुइँचालो आउँदैन भन्दथे । करिव २०० वर्षदेखि हाइटीमा भूकम्प आएको रहेनछ । त्यसैले त्यहाँका घर संरचनाहरु असाध्यै कमजोर थिए ।
तल जमिनमा लडेको अवस्थामा वरिपरिको घरहरु ढलेको देखँे । मान्छेहरु रोई कराई रहेका थिए । म उठ्नै सकिन । एकै छिनमा पेट मुनि आगोले झैं पोल्न थाल्यो । के रहेछ भनि सरेको त जमिन चिरिएर त्यहाबाट तातो बाफ निस्केर पोलेको रहेछ । हामी ५ जना २ वटा घरमा डेरामा बसेका थियौं । अर्को घरमा बसेका प्रमुख सेनानी दीपक कार्की र मेजर दिनेश रजौरे निस्के ।
अनि शेर गणबाट पट्रोल आइ पानी खान हाम्रो डेरामा छिरेका क्याप्टेन जनक सिलवाल र अरु ४–५ जना त्यहाँ रहेछन् । क्याप्टेनसाबले मलाई उठाउन लागे । मैले सोधे यो के भयो भनेर । उनले भूइचालो आएको भने पछि म तिन छक परें ।
अब मैले बुझें की मलाई पनि चुँडिन लागेको खुट्टा पोको पारेर मलाई भोलि फर्काउँछन् । संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो मानवीय संस्था त्यस्तो अपराधि होला भन्ने कस्ले पत्याउछ र ? शान्ति सैनिकको नाताले मेरो उपचार गर्ने हक छदैं थियो ।
मेरो बायाँ खुट्टो विक्षत भएर भाचिएकोले उठ्न सकिन । म अन्डरवेर बाहेक नाङ्गै थिए । परकम्पनहरु आइरहेका थिए । हामी बसेको घरहरु बलियो भएकोले भिरको छेउमा भए पनि भत्केनन् । घर भित्र जाने आँट कसैको भएन । तैपनि जनक भाइ बरन्डाबाट चढेर एउटा पाइन्ट र टिसर्ट अनि मेरो युएन परिचय पत्र निकाली दिए ।
विजुली, टेलिफोन, सवारी केही थिएन । अब मलाई उपचारको लागि फोर्स हे.क्वा.मा लग्न रेस्क्यू गर्न थालियो । त्यो पट्रोल टोली त्यहाँ आएर भुईंचालोले थुनिनु मेरो भाग्य रहेछ । घरवेटी पनि त्यक्तिकै सहयोगी थिए । छ जना जति भएर एउटा काठमा मन्डी बाँधेर मलाई बोकियो । हिड्ने बाटो थिएन । घरले च्यापिएका घाइतेहरु रोइ कराइरहेका, कति च्यापिएर बचाउँ भनेर कराइरहेका थिए ।
पिलरविनाका ढलान भएका घर मात्र भएकाले ति भत्केको घरहरुले बाटोमा पहाड बनेका थिए । ति अवरोधबाट मलाई बोक्दा बोक्दै पराकम्पन आए पछि मलाई छाडेर भाग्थे साथीहरु । मेरो खुट्टाबाट असाध्यै रक्तश्राव भैरहेको थियो । खुट्टा हल्लिँदा पीडाले मरेतुल्य हुन्थँे । पराकम्पन सकिएपछि फेरि मलाई बोक्दथे । फेरि उनीहरु भाग्दथे । आफूलाई पनि बाँच्ने आस कमै थियो ।
तर पछि गएर शम्शेर दल गणबाट शान्ति सेना गएका ओखलढुङ्गा घर हुने हुँदा देवबहादुर कार्कीले अरु भागे पनि उनले मलाई नछाड्ने कसम खाए । ‘सर मर्न परे म पनि मर्छु, म हजुरलाई छाड्दिन’ भने । साँच्चै म उनि प्रति ऋणी छु । बाटोभरी रुख ढलेका, पहिरो पनि गएकोले मेरो रेस्क्यू सहज थिएन । बाटो भरी घाइते मान्छे थिए । मेरो रगतले मन्डी भीजेको र बोक्नेहरु केही पनि भिजेको देखेर ति स्थानीयले ‘यो मान्छे बाँच्दैन मर्छ’ भनेको सुनेँ ।
त्यसपछि मेरो मनोवल एकैपटक शून्यमा झर्‍यो र अब म मर्दैछु भन्ने पक्का–पक्की भयो । आफ्नो सास सकिए जस्तो हुन्थ्यो । तर, पानी पिएँ । फेरि मनोवल उच्च बनाएँ । करिब ३ घन्टा ३० मिनेट जतिमा मलाई फोर्स हेक्वा नजिक फिलिपिन्सको मेडिकल कम्पनीमा पुर्‍याइयो । हाम्रो अफिस ७ तले फोर्स हेक्वा त भत्केर जमिनी सतहमा पुगेछ ।
मेडिकल कम्पनी प्रिफायबको घर भएकोले ठिक अवस्थामा थियो । त्यहाँ शान्ति सैनिक बाहेक हाइटीवासीलाई पनि उपचार गर्न ल्याइएको रहेछ । मेडिकलमा उपचार गर्दा गर्दै थुप्रै मान्छे मर्दै थिए । कति धेरै लास वरिपरि राखिएको थियो । त्यो देखेर मेरो मन फेरि डरायो । अनि मलाई जोर्डनको सैनिक डक्टरले एकैपटक दुइ वटा सलायन चढायो । तर ३० मिनेट जति पछि जमिनमा हेरेको त रगतको धारा बगेको र त्यो निकै तलसम्म पुगेको थियो ।
अनि मैले त्यहाँ कराएर यो कस्को रगत बगेको हेर भने । दुर्भाग्यवस मेरै रहेछ । डाक्टरले मलाई मेरो खुट्टामा ‘तुन्डीकेट’ नबानेकोले त्यसो भएछ । म करिव–करिव रगत बगेर कोल्याप्स हुन लागेको रहेछु । ३ घन्टा भन्दा बढी रगत बगिरहेको थियो । मलाई तुरुन्त रगत दिनु पर्ने थियो । तर त्यहाँ रगत उपलब्ध थिएन । पानी खुवै पिएँ । बाँच्नु पर्छ भन्ने मनोबल मा बसें ।
गजबको कुरो त डेपुटी फोर्स कमान्डर (उनको श्रीमती त्यही भरखरै घरले थिचेर मरेकी थिइन) फ्रान्स, क्यानडा, लगायतका डिभीजन चीफहरु घाइते बिरामी बोकेर उपचार गराउँदै थिए । फोर्स कमान्डर बिदामा घर ब्राजिल गएका थिए । ती पश्चिमाहरु परेको बेला सहयोग गर्दा रहेछन् । तर नेपालबाट खटिएका र त्यहाँ डिभिजन चिफ रहेका अधिकृत भने भोलि पल्ट मात्र आए रे ।
त्यहाँ कोही देखिएनन् । उनले चाहेको भए ३ घन्टा भित्र अवस्य आई पुग्थे । हामीलाई खल्लो लाग्यो परेको बेला नेपाली कोही नदेख्दा । तर अर्को दिनमा नेपाली समाचारहरुले मलाई झ्यालबाट फराल्दा खुट्टा भाँचिएको लेखेछन् । अनि रेस्क्यूमा नखटिएका र भोलिपल्ट मात्र फोर्स हेक्वा पुग्ने हाकीमको बारेमा नेपाली समाचारहरुमा भने ‘यो गर्‍यो र त्यो गर्‍यो’ भनेर नगरेको कामको प्रचार प्रसार गरिएछ ।
फोर्स हेक्वामा उपचार नहुने भए पछि म लगायत अरु सिरियस घाइतेहरुलाई राति १२ बजे तीर नै गाडीबाट शेर गण बसेको इलाकाको नजिक रहेको अर्जेन्टिनाले खडा गरेको अस्पताल लगियो । त्यतिखेर सम्म शान्ति सैनिकहरुले बाटो खोलिसकेका थिए । मलाई रगत दिइयो अनि रगत थामिने सुई लगाए । भाँचिएको खुट्टालाई तन्काएर राखियो । यस बेलासम्म मलाई मेजर दिनेश रजौरेले छाडेका थिएनन् ।
अरु फर्केर डेरा गए जस्तो लाग्छ । शेर गणमा बसेका कन्टिन्जेन्ट कमान्डर मलाई हेर्न आउछन् कि जस्तो लागेको थियो, आएनन् । भोलिपल्ट बिहानै हामी चार जनालाई हेलिकोप्टरबाट डोमेनिकन रिपरिब्लकमा रहेको अमेरीकी अस्पतात लगियो । त्यही दिन मेरो अप्रेसन भयो । भोलिपल्ट बिहानै अप्रेसन गरेको मेरो खुट्टा हेर्दा फेरि छुट्टिएर २ टुक्रा हुन लागेछ । म कराएँ । बल्ल बल्ल डक्टर आयो २ दिन पछि फेरि अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेर खुट्टामा ब्यान्डेज बाँधिदियो ।
त्यसको २ घन्टापछि अस्पतालको वेड मै मलाई दुई सय डलर, एउटा कट्टु र एउटा गन्जी दिइयो । मेरो घर ठेगाना सोधियो । किन होला थाहा पाइन । ब्रेकफाष्ट दिने नर्सले मलाई भनिन् कि मलाई अर्को दिन नेपाल फर्काइंदैछ, उपचारको लागि । मलाई नेपाल फिर्ता गर्न २ जना यूएनका कर्मचारीले १५ दिनको बाटो म्याद र दिनको २०० डलर समेत भत्ता पाउने रहेछन् ।
उनीहरुको लागि म जस्ता विरामी त्यहाँ जानु भनको त स्वर्णिम अवसर रहेछ, विदेश घुम्न । त्यो कुरो बुझ्न आधिकारिक रुपले प्रयास गरें । कोही बोल्दैनन् । मसँगै रहेको जोर्डनको प्रहरी अधिकृतलाई त्यही साँझ नै फर्काए जोर्डन । अब मैले बुझें की मलाई पनि चुँडिन लागेको खुट्टा पोको पारेर मलाई भोलि फर्काउँछन् । संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो मानवीय संस्था त्यस्तो अपराधि होला भन्ने कस्ले पत्याउछ र ? शान्ति सैनिकको नाताले मेरो उपचार गर्ने हक छदैं थियो ।
मेरो उपचारको बारेमा सोधें । स्पेनिस भाषा बोल्ने नर्स डक्टर भएकोले मलाई जवाफ दिन सकेनन् । म चिच्याँए, कराय, रोए पनि । खाटमा बसेर कप प्लेट फुटाएँ । बल्ल अंग्रजी बोल्ने १ जना डक्टर आए अनि मैने यूएनको सम्पर्क अधिकारी बोलाउ भनेँ । एक जना महिला आइन् । मेरो ठूलो विवाद पर्‍यो । अनि मैले भने मलाई उपचार नभएरै नेपाल फर्काइयो भने म आत्मा हत्या गरिदिन्छु ।
एक राति १० बजेर १५ मिनेट गएको थियो होला मधुरो बत्ति मुनि म सुतेको मेडिकलमा एक जना मेजरसाव आएर मलाई एउटा कागजमा सही गर्न भने । सँगै डेरामा बसेकोले उनीमाथि मलाई पूर्ण विश्वास थियो । उनले केही होइन अफिसमा रेकर्डको लागि हो भने । मलाई नेपाल फर्काउने कुरा सोधे । उनले होइन भने सहि गरिदिएँ, म सुतेँ।
म भुइँचालोमा परेको र २ दिन पछि फेरि खुट्टा अप्रेसन गर्नुपर्छ भन्नेहरुले त्यस्तो अमानविय व्यवहार गरेको बारे बीबीसी र सिएनएनलाई बताउछु भनें । म ठूलो स्वरले चिच्याउन थालेँ । त्यो अत्याचर सहनै सकिनँ । त्यति खेरै विश्व स्वास्थ्य संगठनको ठूलो डक्टर विरामी हेर्न जेनेभाबाट आई पुगिछन् । मेरो बेडमा पुग्दा मैले उनलाई आफ्नो बेदना बताएपछि उनले यूएनको तर्फबाट माफी माग्दै मेरो उपचार त्यहीँ गरिने बाचा गरिन् ।
अब भोलि पल्ट फेरि मेरो अप्रेसन भयो । खुट्टा ठुलो फलामले बाँधिएको थियो । त्यतिबेलासम्म हाइटीबाट शान्ति सेनाका ठूलो अफिसरहरु आएर मलाई भेटे, सान्त्वना दिए । भर्ना भएको ३ दिनपछि स्थानीय पत्रिकामा मेरो नाम देखेर मलाई भेट्न ४ जना नेपाली अस्पताल आए । उनीहरुले मलाई मोबाइल, लुगा खानेकुरा किनिदिए । पैसा दिए ।
पटक–पटक भेट्न आएपछि थाहा पाएँ ति नेपालीलाई दलालले नेपालबाट अमेरिका लग्छु भनेर हाइटीको जंगलमा छाडेर भागेको रहेछ । त्यसपछि लुकेर ती नेपालीहरु डोमेनीकन पुगेका रहेछन् । तिनको आपत विपत कहाली लाग्दो थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि मलाई भेटेर मद्दत गरेकोमा ति सन्तान जन्माउने आमा बुवाप्रति समेत आभारी छु । मोबाइल पाएपछि घरमा सम्पर्क गरेँ । मलाई डिप्रेसन बढेको थियो ।
आफू भन्नु कोही थिएन । १० दिन जति त्यही भर्ना भएँ । त्यतिबेला सम्म मेरो कन्टिन्जेट कमान्डर भेट्न आएनन्, एक कल फोन गरेनन् । अरु जुनिएर अधिकृतहरुलाई समेत भेट्न पठाएनन् । त्यहाँ पुग्न हाइटीबाट हेलिकोप्टर ४० मिनेट लाग्थ्यो भने निःशुल्क यूएनको उडान दिनमा ३/४ वटा हुने गर्दथ्यो । त्यसैगरी नेपालबाट समेत सैनिक मुख्यालय तथा प्रधानसेनापतिको कुनै सान्तवना शब्द पाइँन ।
तर, एउटा अचम्मको घटना के भयो भने मलाई अस्पतालमै फोन गरी तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको शुभकामना सन्देस सुनाइयो । उनले टेलिभिजनमा हेरेर थाहा पाएको र एउटा नेपाली सेनाको अधिकृत भएको नाताले यो गरेको भने । म आजसम्म पनि उहाँप्रति ऋणि छु । तर, उनको वादप्रति म कहीलै आकर्षित छैन ।
थप उपचार १५ दिनपछि गरिने सर्तमा डोमेनिकन अस्पतालबाट मलाई हाइटीमा रहेको यूएन अन्तरगतको अर्जेन्टिना अस्पतालमा फिर्ता गरियो । पोर्टओप्रिन्स एअरपोर्टमा मलाई भेट्न त्यही यूएनमा काम गर्ने नेपाली डक्टरहरुले मेरो खुट्टाको एक्सरे हेरेर मेरो खुट्टा काट्नुपर्ने बताएछन् । बेलुकी मलाई सम्झाउन अस्पतालमा थुप्रै नेपाली आए ।
त्यहाँ भएका २ जना नेपाली आर्मी डक्टरले अमेरिका पठाउन कटिन्जेन्ट कमान्डरलाई भने । तर उनले सहयोग गरेनन् । २ रात पछि अर्जेन्टिना अस्पतालबाट युएनले फेरि मलाई नेपाल फर्काउने योजना बनाएर २ जना मेडिकल टोली तयार भएछन् । उनीहरुले १५ दिनको भ्रमण भत्ता पाउने । त्यो कुरा थाहा पाएपछि ‘मेरो थप उपचार बाँकी छ’ भनेर बेस्करी कराएँ ।
मनोवैज्ञानिक चिकित्सकहरु मार्फत यो कुरा न्यूयोर्कसम्म पुगेछ । ठूलै विवाद गरे मैले । उपचार पाउनु मेरो अधिकार हो । त्यहाँको फोर्स मेडिकल अफिसरले मलाई धेरै मद्दत गरे । अन्ततः मलाई फेरि थप उपचारको लागि १ जना नेपाली डक्टरको साथ डोमेनीकन अस्पताल पुर्‍याउँदा उताको डक्टर छक्क पर्‍यो । म मात्र त्यस्तो केस रहेछु त्यस अस्पतालमा दोहोरायर उपचार पाउने । फेरि खुट्टाको अप्रेसन गरेर केही दिन पछि हाइटीको अर्जेन्टिना अस्पतामा भर्ना भए ।
त्यहाँको खाना नमिठो, भाषा नबुझ्ने र बंकर जस्तो घरमा सधैँ अंधेरो हुँदा न्यास्रो लागेर आदेश लिएर शेर गणको मेडिकलमा सरें । त्यहाँ रमाइलो माने ।
मिसनमा घाइते भएपछि देश फर्काउने नियम हुन्छ । तर, फोर्स मेडिकलको सिफारिसमा ‘एड्जूटेन्ट’ विभागमार्फत फोर्स कमान्डरले उपचारको लागि राख्न सक्ने भएकोले मलाई अरु ४५ दिन जति त्यहीँ राख्ने भयो ।
उपचार अवधि भरी यूएनले ६६ प्रतिशत पैसा काट्दछ । एड्जून्टेन्ट विभागको चिफ नेपाली कन्टिन्जेन्ट कमान्डर नै थिए । तर उनी मलाई त्यहाँ राख्ने पक्षमा थिएनन् । एक राति १० बजेर १५ मिनेट गएको थियो होला मधुरो बत्ति मुनि म सुतेको मेडिकलमा एक जना मेजरसाव आएर मलाई एउटा कागजमा सही गर्न भने । सँगै डेरामा बसेकोले उनीमाथि मलाई पूर्ण विश्वास थियो । उनले केही होइन अफिसमा रेकर्डको लागि हो भने । मलाई नेपाल फर्काउने कुरा सोधे । उनले होइन भने सहि गरिदिएँ, म सुतेँ।
भोलि पल्ट अर्जेन्टिनाको फोर्स मेडिकल अफिसर कर्नेलले मलाई फोन गरी ‘तिमीले किन नेपाल फिर्ता जान्छु भन्ने कागजमा सही गरेको’ भनेर सोध्यो । मैले होइन भने । तर त्यो योजना कन्टिन्जेन्ट कमान्डरको रहेछ र मेजर मार्फत झुक्याएर मलाई सहि गराइएको । कार्य विभागको प्रमुख उनै भएकोले म ४८ घन्टाको नोटिसमा नेपाल फर्कने भए ।
मैले गर्नुपर्ने युएनको सम्पुर्ण बुझ–बुझारथ बाँकी थियो । मलाई राति सही गराइएको कागजबारे कन्टिन्जेन्ट कमान्डरलाई एम्बुलेन्स चढेर उनको अफिसमा सोध्न पुगे, बैसाखी टेकेर । तर सही गराउने मेजर र उनी मिलेर मलाई अति नै निच बचन लगाए । मैले टेकेको बैसाखीले झटारो हाने । कसैलाई लागेन । म जस्तो घाइतेमाथि गरेको त्यो व्यवहारले मलाई चित्त दुखायो ।
भोलिपल्ट बिहानको फ्लाइटमा ह्विलचेरमा मलाई नेपाल फर्काइयो । जहाजको ढोका भित्र छिर्ने बेलामा कर्नेल पाण्डेको मोवाइलबाट फोन आयो तर बोल्ने मान्छे उनै कन्टिन्जेन्ट कमान्डर थिए र भने ‘प्रेम जे जति मबाट भयो माफ देउ’ मलाई अचम्म लाग्यो । अनि नेपाल फर्केपछि मेरो प्रमोशन हुनेवाला थियो । प्रमोशनको फूली लगाए पछि छुट्टै बोलाएर चिफसावले सुनाउनुभयो ‘प्रेम हाइटीबाट तिम्रो कन्टिन्जेट कमान्डरको रिपोर्ट अनुसार तिमीले प्रमोशन पाउन्न थियौं ।
तर यूएनलाई बुझ्दा ‘आउट स्टायन्डिङ्ग रिपोर्ट’ आएकोले प्रमोशन दिएको हुँ’ । मैले प्रमोशन विगार्न प्रयास गर्ने र प्रमोशनको लागि न्याय दिने दुवैलाई मनमनै धन्यवाद दिएँ । मेरो र कन्टिन्जेन्ट कमान्डरको कहिलै नराम्रो भएको थिएन । हाइटिको भूईंचालो र मेरो संघर्ष म आफैंलाई अविष्मरणीय रहेको छ । त्यो भन्दा पनि ठूलो दुःखको कुरो त नेपालमा २०७२ बैशाखको भुइँचालोमा मैले मेरो मूमा गुमाएँ । त्यसैले मेरो र भूईचालोको विशेष सम्वन्ध रहेको छ ।
प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७५, मंगलबार ९ : ३५ बजे